3 Mods iji hazie ojiji nke WhatsApp | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Hazie gam akporo, Nkuzi, Whatsapp
WhatsApp bụ ngwa ozi kachasị ewu ewu n'ụwa, na mgbakwunye na nke kachasị ebudatara n'etiti ndị ọrụ gam akporo. Ka oge na-aga, e mere ya ọtụtụ ndozi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ nke ngwa na-atụ uche na-enwe ike iji hazie ụfọdụ akụkụ nke ya. Luckily, n'ihi na nke a anyị nwere Mods.
N'ihi mods ndị a, anyị nwere ike ubé gbanwee WhatsApp. N'ụzọ na ngwa adapts ka mma ka anyị uto. Anyị nwere ike iwebata mgbanwe ya interface, ma ọ bụ nwee ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ na-eme ka ọ nwekwuo oke.
Ọzọ anyị ga-ekwu maka mods atọ maka WhatsApp, nke ị kwesịrị ị ghara ileghara anya. Ekele ha, ahụmịhe nke iji ngwa ahụ ga-aka mma, na mgbakwunye na ịnye gị ọtụtụ nhọrọ iji hazie ihe niile n'ụzọ ga-adịrị gị mma.
1 Whatsapp gbakwunyere
Anyị na-amalite site na mod a, nke nwere ike bụrụ nke na-ada ọtụtụ n'ime gị ụda. Ọ bụ ngwa APK nke anyị ga-enwe ike idozi ụfọdụ ihe anaghị eme ka anyị kwenye nke ngwa ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, na-enweta mmelite mgbe niile, ka anyị wee nweta ọrụ ọhụụ mgbe niile. Kedu nhọrọ ndị mod a na-enye anyị maka WhatsApp?
Nhazi onwe bu otu n’ime ihe mbu, ebe obu -enye anyị ohere imeghari interface, na-agbanwe agba ma ọ bụ font. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịwụnye isiokwu dị iche iche na ngwa ahụ, nke ga-enyere anyị aka ime ka ojiji ya dị mfe maka anyị. E wezụga nke a, ọ ga-enye anyị ọrụ ndị ọzọ. Fọdụ n'ime ọrụ ndị dị mkpa na ọnọdụ a bụ ndị a:
Zipu nnukwu vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọdịyo
Zoo foto profaịlụ
Inwe ike idetuo akụkụ nke ederede iji zigara ya ndị ọzọ
Budata ma ọ bụ zipu foto na ogo mbụ
Atụmatụ ngwa ngwa
Lelee oge njikọ site na ihuenyo nkata
Nwere mmasị na mod a maka WhatsApp? I nwere ike ibudata ya na njikọ a. Ọ bụ ngwa, yabụ gbaa mbọ wepụ ya na ekwentị gam akporo gị.
Nke abuo, anyi choputara uzo ozo nke kachasi nma nke anyi nwere maka WhatsApp taa, ikekwe ị maara. Ọzọ, anyị na-eche ihu APK. N'ihi ya anyị ga-eme ya nwee ike gbanwee ụfọdụ ọrụ na ọdịdị nke ngwa ahụ na ekwentị gam akporo anyị. Nke mere na iji ya dịrị anyị nfe.
Mod a maara dị ka nke na-enyere anyị aka melite arụmọrụ nke ngwa ahụ. Ọrụ ya na-enye anyị ohere inweta ọtụtụ ihe site na iji ya. N'ime ha, anyị nwere ike ịchọta jiri akaụntụ WhatsApp abụọ n'otu oge, na-eji otu ngwa ahụ.
La nzuzo bụ akụkụ ọzọ dị mkpa maka mod a, nke na-enye anyị ohere zoo ọnọdụ, ma ọ bụ nyocha abụọ na-acha anụnụ anụnụ, guzobe okwuntughe iji nweta nkata, ma ọ bụ na kọntaktị ndị ọzọ enweghị ike ịhụ mgbe anyị na-ede ma ọ bụ dekọọ ozi ... Dịka na mod gara aga, anyị Ọ na-emekwa ka izipu ụdị faịlụ niile, yana usoro dịka PDF ma ọ bụ DOC, yana ịdị arọ nke 50 MB.
Ọzọkwa anyị nwere ike gbanwee WhatsApp interface na-eji nke a mod. Anyị nwere ike ịgbanwe akụkụ, dị ka menus ọhụrụ ma ọ bụ font ma ọ bụ agba nke ngwa ahụ. N'ihi ya, ọ ga-adịrị anyị mma karị ịnwe ike iji ya oge niile.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata mod a, ị nwere ike ime ya na njikọ a. Dịka anyị kwuru, ọ bụ APK, yabụ ọ dị mkpa na ịnwere ohere ibudata ya. Ugboro emelitere na ihe ohuru na ndozi.
N'ikpeazụ, ụdị nke atọ a anyị nwere ike iji WhatsApp na-echere anyị. O nwere ike ịbụ na ọ dịkarịa ala mara nke atọ anyị kpọtụrụ aha na ndepụta a, mana ọ bụ nhọrọ ọzọ dị mma nke ga-enye anyị ohere ịhazi ojiji nke ngwa a ma ama. Ọ bụ ezie na aha ya amalite inweta ọnụnọ n'etiti ndị ọrụ gam akporo.
Nzuzo bu ike nke mod a, nke bu ihe n’enye gi ohere inweta aha n’etiti ndi oru. Anyị nwere ike ichedo mkparịta ụka site na iji paswọọdụ, ọbụnadị nwee ike ịmepe paswọọdụ site na nkata ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Iji jikwaa akụkụ niile nke nzuzo, anyị nwere wijetị nke na-akwado ọrụ a.
N'ụzọ ezi uche, ịbụ a mod, na-enye anyị ohere iji gbanwee WhatsApp interface. Anyị nwere ike ibudata isiokwu iji hazie ya, na mgbakwunye ịgbanwe font ma ọ bụ agba ya. Na mgbakwunye na nke a, mod na-enye anyị ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ihe ndị a:
Jiri akaụntụ abụọ n'otu oge
250 agwa statuses
Zoo ificationsma Ọkwa ma ọ bụrụ na ha enye gị nsogbu
Zoo ọnọdụ njikọ gị na kọntaktị ndị ọzọ
Na-ezipụ vidiyo ruo 1GB na faịlụ ruru 50MB
Zipu foto ndi ahu na nke mbu, dika adighi mpikota onu
Emoji ngwugwu ịhọrọ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata mod a na ụdị APK, ị nwere ike ime ya na njikọ a. Ọzọ, ọ dị mkpa na ị nwere ikike nke isi mmalite amaghi ibudata ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Hazie gam akporo » 3 Mods maka WhatsApp iji hazie ngwa ahụ
Mods ndị a anaghị eme ka WhatsApp kwụsịtụ akaụntụ ndị na-eji ya?
Anọ m na-eji GBWhatsApp ọtụtụ afọ ma enwebeghị nsogbu ọ bụla
Obiwan 2208 dijo
Etu esi hazi akaụntụ nke abụọ na #GBwhatsapp?
Amaghị m ọrụ ahụ, mana elere m ya anya ma anaghị m ahụ ya, ha amaghịkwa ihe ọ bụla na otu WhatsaMODs
Ekwadoro m ihe kachasị ọhụrụ nke Whatsapp Plus update.net/whatsapp-plus